Ukudityaniswa kwe-N11-Ilungiselela ukuthumela ngaphandle kwe-E kunye neAmazon, i-Ebay, i-Allegro kunye ne-Etsy
Kulula ukulawula ivenkile yakho ye-n11.com ngePropars!
Zonke izitokhwe zilandelwa ngokuzenzekelayo. Ixabiso kunye notshintsho lwesitokhwe lubonakaliswa kwangoko
Ii-odolo ezivela kwi-N11 ziqokelelwa kwiscreen esinye nayo yonke eminye imiyalelo yakho.
Inkqubo yakho ye-ERP
Iimveliso kunye neMiyalelo
Iimveliso / iiodolo Iindawo zentengiso
Kulula ukuthengisa kwiN11.com ngePropars!
Ungalayisha iimveliso zakho kwiPropars ngobuninzi nge-Excel okanye i-XML.
Ungazithengisa iimveliso ozongeza kwiPropars kwi-N11 ngonqakrazo olunye.
Yenza uhlaziyo oluninzi kwiimveliso.
Yenza i-invoice yasimahla yee-odolo zakho ngonqakrazo olunye
Lawula i-e-commerce kwiscreen esinye kunye nePropars Marketplaces Integration
Ukungena kweMveliso ngokulula: Unokongeza iimveliso ozongeza kwiiPropar kwiivenkile zakho kuzo zonke iimarike ngaxeshanye kwaye uzivulele ukuba zithengiswe.
Uguqulo lwemali oluzenzekelayo: Ungathengisa iimveliso zakho ezithengiswa ngemali yangaphandle kwiimarike zaseTurkey kwi-TL, kwaye ungathengisa iimveliso zakho kwi-TL ngamaxabiso ahlukeneyo otshintshiselwano kumazwe ahlukeneyo.
Ukuhlaziywa kwangoko kweStock kunye neXabiso: Ungajonga ngoko nangoko iivenkile zakho kunye neevenkile ezibonakalayo kwezona ndawo zikhulu zehlabathi ze-e-commerce iAmazon, i-eBay kunye ne-Etsy. Ngamanye amagama, xa uthengisa imveliso kwiiPropars kwivenkile yakho yomzimba kwaye uphelelwa sisitokhwe, imveliso ivalwa ngokuzenzekelayo ukuba ithengiswe kwivenkile ekwiAmazon France ngaxeshanye.
Iindawo zentengiso ezingakumbi: Iimarike zaseTurkey kunye neendawo zentengiso eziphambili zehlabathi, iiPropar, zihlala zongezwa kwiimarike ezikhoyo nakumazwe amatsha.
Okwangoku: Izinto ezintsha ezenziwe kwiimarike zilandelwa yiPropar kwaye zongezwa kwiiPropar.
Amaxabiso amaninzi: Ngokudala amaqela exabiso, ungathengisa kuyo nayiphi na indawo yokuthengisa ngexabiso olifunayo.
Ulawulo lwenqaku: Unokulawula ngokulula iimpawu zemveliso ezifunekayo kwiimarike ngePropar.
Iinketho Product: Ungathumela iinketho zemveliso ezinje ngombala kunye nobukhulu kuzo zonke iimarike ngokuchaza iifoto ezahlukeneyo kunye namaxabiso ahlukeneyo.
IiPropar imibuzo ebuzwa rhoqo
NgePropar, qala ukuthengisa ngokucofa kube kanye kwiimarike zehlabathi ezinje ngeAmazon, Ebay kunye neEtsy!
Qokelela zonke iiodolo zakho kwiscreen esinye, i-invoyisi ngokucofa kanye! Inokukhupha ii-invoyisi ezininzi kwii-odolo ezivela kwiindawo zentengiso kunye neyakho indawo ye-e-commerce; Ungayiprinta ifom yempahla eninzi.